Izindaba - Uma ukupakisha kwakho kungaboliseka kalula noma kubusheleleke emoyeni
I-Eco-friendly manje iba umkhuba, abantu abaningi ngokwengeziwe bayayikhathalela usuku nosuku, njengoba sibhekene nokuphakamisa izinhlekelele ezibangelwa ukubhujiswa kwemvelo yithi uqobo. Kithina, njengomkhiqizi webhokisi lokupakisha, kuvame ukubuzwa, ukuthi ibhokisi lakho liyabola yini?
Okokuqala, ake sithole ukuthi yini ebolayo ngokubola?
“Ukudla okubolayo” kubhekisa emandleni ezinto ukuthi ahlukane (abole) yisenzo sezinto ezincane ezinjengebhaktheriya noma isikhunta semvelo (esine-oxygen engenayo) ngenkathi sifakwa endaweni yemvelo. Akukho monakalo emvelweni ngesikhathi senqubo.
Ngemuva kwalokho, ake sibone ukuthi iyiphi impahla esiyisebenzisele ibhokisi? Imvamisa amakhadibhodi ampunga, iphepha eligotshwe, iphepha lobuciko, iglu elihlanganiswe nopende wokuphrinta nemikhawuko.
Empeleni lezo ezingeke zaba yingxenye yokubolayo yiglue kanye nemikhawuko.
Ake sithi iglue kuqala. Ngobuningi beglu obusetshenziswa emakethe, buyonakala kodwa budinga isimo esidlulele. Kepha kukhona okunamathelayo okusunguliwe, lelo ikusasa lethu eliqhakazile lomkhakha wethu.
Ngomkhawulo, singakhetha okokusebenza okuluhlaza ngaphandle kokungeza noma yimuphi umkhawulo noma engeze umkhawulo opendwe ngoyili.
Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, ibhokisi lethu lokupakisha li-eco-friendly.